Dalladda Waxbarashada SAFE oo markale ka hadashay Natiijada Imtixaanka Dowlada | Somalia News
Dalladda Waxbarashada SAFE oo markale ka hadashay Natiijada Imtixaanka Dowlada
Hoggaanka sare ee Dalladda Waxbarashada SAFE iyo maamulayaasha iskuulada hoos yimaada Dalladda ayaa maanta kulan balaaran ku yeeshay magaalada Muqdisho.
Kulanka ayaa mar kale lagu cadeeyay in Dalladda SAFE iyo Iskuulada hoos yimaada aysan weli ku qanacsaneyn natiijada imtixaanka oo ay shaacisay Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya.
Masuuliyiinta Dalladda SAFE iyo maamulayaasha iskuulada ayaa wasaaradda waxbarashada ku dhaliilay in aysan diyaar u ahayn in ay qanciso ardayda, waalidiinta, macalimiinta iyo Dalladdaha Waxbarasho.
Sidoo kale waxay ku baaqeen in ay muhiim tahay in la cadeeyay sababta 8 kun oo arday ay ku dhaceen iyo sababta ay Wasaaradda Waxbarashada u diiday in dib loo baaro natiijada imtixaanka maadaama aan lagu wada qancin.
Kulanka ayaa lagu cadeeyay in maamulayaasha Iskuulada iyo hogaanka Dalladda SAFE ay go’aansadeen in guddoonka waxbarashada gobolka banaadir iyo wasaaradda in aysan wax xiriir ah la sameyn doonin inta ay taallo cabashada Ardayda.
Agaasimaha fulinta ee Dalladda Waxbarashada SAFE Keysi Mayow Abul Xuseen oo warmurtiyeedka ka soo baxay kulankooda warbaahinta u aqriyay ayaa sheegay in ay muhiim tahay in dib loogu noqdo natiijada Imtixaanka.
Sidoo kale waxa uu sheegay in Madaxweyne Farmaajo looga baahan yahay in arrintaan uu soo fara geliyo kana hadlo dhibaatada lagu hayo Ardayda Soomaaliyeed.
Ugu dambeyn waxa uu madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ee ku shirsan Muqdisho ugu baaqay iney si deg deg ah ugu jawaabaan cabashada ardayda iyo sida loola dhaqmay isla markaana la sameeyo guddi dib u baara natiijada Imtixaanka.
Dallada SAFE oo ka hadashay imtixaanka dugsiga sare
Previous articleUK donates dozens of military vehicles to Somalia – defenceWeb
Next articlealmost 57,000 jobs have been planned since March